Qashinka lagu aaso cagaf TYS165-3HW - Shiinaha Xuanhua Dhismaha Makiinado
bulldozer TYS165-3HW waa 165 hooras dozer nooca-track la drive toos Haydarooliga, semi-adag ganaax iyo Haydarooliga caawinta ka hawlgala, gacanta daab Haydarooliga pilot iyo hal isteerinka heerka iyo codkeeda gacanta. bulldozer TYS165-3HW waxa lagu gartaa hufan, view furan, qaab-dhismeedka filaayo, qaliin fudud sare iyo adeeg la kharash yar oo tayo leh oo lagu kalsoonaan karo oo dhan. Waa wax soo saarka hagaajinta looga hawlgalaa qashinka shaqada. Caddaymaha Dozer T ...
bulldozer TYS165-3HW waa 165 hooras dozer nooca-track la drive toos Haydarooliga, semi-adag ganaax iyo Haydarooliga caawinta ka hawlgala, gacanta daab Haydarooliga pilot iyo hal isteerinka heerka iyo codkeeda gacanta.
bulldozer TYS165-3HW waxa lagu gartaa hufan, view furan, qaab-dhismeedka filaayo, qaliin fudud sare iyo adeeg la kharash yar oo tayo leh oo lagu kalsoonaan karo oo dhan.
Waa wax soo saarka hagaajinta looga hawlgalaa qashinka shaqada.
(ma ku jiraan ripper) miisaanka Operation ( Kg) 192200
Cadaadiska Ground (K Pa ) 41.1
Eeg Track (mm) 2300
Min. ansixin dhulka (mm) 373
Kooleeyay awoodda ( m ³) 4.6
Width daab (mm) 4222
Max. qodayaa qoto dheer (mm) 400
Cabbir Guud ( mm ) 5528× 4222× 3 190
Qiimeeyo kacaanka (rpm) 1850
Awood Flywheel ( K W / HP ) 121/165
Max. Xuddunta (N • m / rpm) 830/1100
Qiimeeyo isticmaalka shidaalka (g / kw • h) ≤ 218
Nooca nooca Swing of dogob buufiyaa.
Qaab-dhismeedka ganaax of bar barbaraha
N umber of rollers track ( kasta dhinaca) 6
Number of rollers side (dhinac kasta) 2
P cambaarta (mm) 203
W idth of kabaha (mm) 800
Dib bay (Km / h) 0-4. 33 0- 8.90 0- 14.96
Max. nidaamka cadaadiska (MPA) 12
saar nooca Laba kooxood oo Yeelanaya bamka
Saarka System ( L / min ) 185
T orque Converter 3-element 1-yada 1-waji
S teering xajin. Multiple-disc disc metallurgy awood saliid Tifaftirayaasha by guga. Haydarooliga ku shaqeeya.
Fariin Biriigu xajin saliid laba jiho kala jejebiyey band sabayn ku shaqeeya by baydalka cagta farsamo.
F drive inal drive The final yihiin hoos double la marsho kicisay iyo sprocket qeybta, kaas oo la daboolay by seal Labada-koorta.
Previous: Qashinka lagu aaso cagaf SD7HW
Next: Qashinka lagu aaso cagaf TYS165-3HW
Qub QASHINKA cagaf TYS230-3HW
Dhirta cagaf SD6G